Rev. Zel Siam Kham – Full Gospel Assembly
Rev. Zel Siam Kham
ဆရာကတော့ Speaker(မိုက်) ကို အသုံးပြုပြီး စက်ဘီးနှင့်လှည့် လည်ဟောပြောဝေငှခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။ ဝေစာများကိုလည်း ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပြီး လူနာများစွာကိုလည်း ဆုတောင်းပေးခွင့်ရပြီး နိမိတ်လက္ခဏာများစွာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါမှစ၍ အခြားရောဂါများလည်း ဘုရားရှင် ပျောက်ကင်းခွင့်ပြုပါပြီး သေသောသူနှစ်ဦးကိုလည်း ဘုရားသခင်ပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။
ဆရာ့ကို ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်၊ လိုင်တွီးကျေးရွာတွင် အဘ U Pau Khaw Gin (ခေါ်) Thang Dal နှင့် Daw Zen Niang တို့မှမွေးဖွားခဲ့ပြီး
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင်ယေရှုခရစ်ကို မိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံပြီး သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော် ရရှိပြီး ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခဲ့ကာ ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးနောက်ပိုင်း Free Evangelist အဖြစ် ဆက်ကပ်ပြီး ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းကို လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောဝေငှခဲ့တယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် International School of Ministry မှ Diplo-ma of Biblical Studies ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အချိန်ပြည့် အမှုတော်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ဆက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် လိုင်စင်ရ ဓမ္မ အမှုတော်ဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့မှာသိက္ခာတော်ရဆရာအဖြစ် ဓမ္မသိက္ခာတင်ခြင်းရခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Rev. Niang Zom Mang နှင့်လူရှေ့ ၊ ဘုရားရှေ့ တွင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ပါတယ်။
စွဲကိုင်သော ကျမ်းပိုဒ် ရှင်ယောဟန် ၁၀:၁၀
အမှတ် (၉၂၄)၊ မြတ်လေးလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊